Home News Xildhibaan Abukaate”Qas wadayashu Ma Heystan Tiro ku filan,Waxa ayna Donayan in ay...
Xildhibaan Abukaate”Qas wadayashu Ma Heystan Tiro ku filan,Waxa ayna Donayan in ay baal maraan Dastuurka”
iyado Mooshin ka dhan ah Gudoomiye Jawaari ay wadaan Xukuumada Soomaaliya oo dhabar ka taabasho ku heysa Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka aya waxa sii kordhaya tirada xildhibanada ee Mooshinka ka wada Gudomiye Jawaari waxana Dhaqaale Xoogan ku bixinaya Raiisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Xildhibanada Mooshinka wada aya sido kale qorshayaashoda waxa ka mid ah in fooda laga dhex abauuro Baarlamanka xiliga leysu yimaado oo Mooshinka lo fadhiyo.
Xildhibaan Maxmauud Abuukaato oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in XIldhibaannada wada mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha Baarlamaanka ay doonayaan in mooshinka uu noqdo gacan taag.
Waxaa uu sheegay in Dastuurku uu qorayo mooshinka marka loo codeynayo in uu noqdo qarsoodi hayeeshee Ragga hadda mooshinka wada ay doonayaan in dastuurka la garab maro oo gacantaag laga dhigo si ay u ogaadaan inta codka siisay iyo in intakale.
Xildhibaanku waxaa uu sheegay kuwa qas wadayaasha ah in aysan heysan tiro ku filan sidaas darteedna ay doonayaan in ay gacantaag u dhacdo mooshinka ka dhanka ah guddoonka golaha shacabka Soomaaliya.
Guddoomiye Jawaari ayaa si xilkasnimo ah XIldhibaannada Mooshinka ka keenay kaga codsaday in ay tirada dhameystirtaan 10 maalmood gudahood sida uu qaba xeer hoosaadkana ay mooshinka geeyaan Golaha shacabka.
Tan iyo bilaabashadi Mooshinka Kheyre iyo Qadar ay isku kashanayan waxa istaagay howlihi shaqo ee ka socday Xafiisyada Wasiirada iyo xili la hurdo iyo xili mooshinka loosoo kaco ay noqotay ISLA XISAABTANKII boolo Xuuftada ahaa ee dhagaha Shacabka loga shekeyo xili waliba.